गर्भावस्थामा रोग प्रतिरोध क्षमता कसरी बलियो बनाउने ? - Season
गर्भावस्थामा रोग प्रतिरोध क्षमता कसरी बलियो बनाउने ?
सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी सचेत र सर्तक हुनुपर्छ, गर्भावस्थामा । यो आफैँमा एक संवेदनशील समय हो । यतिबेला गर्भवतीमा शारीरिक परिवर्तनहरू देखापर्छ, साथसाथै भावनात्मक पनि । त्यसैले गर्भवतीले सकेसम्म आफूलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सन्तुलित राख्नुपर्छ।
गर्भावस्थामा उचित खानपान र सन्तुलित जीवनशैली मात्र होइन सोच चिन्तन पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ । गर्भवतीको मानसिक स्थितिसँग गर्भमा हुर्कंदै गएको बच्चाको स्वास्थ्यको समेत सोझो सम्बन्ध रहन्छ । त्यसै त गर्भावस्था खुसी, उमङ्गित, सकारात्मक एवं चिन्तामुक्त हुनुपर्छ भनिएको हो ।
गर्भावस्थामा संगीत सुन्नु पनि राम्रो मानिन्छ । यसले गर्भवतीलाई अनावश्यक मानसिक तनावबाट मुक्त राख्न मद्दत गर्छ । मनलाई शान्त र आनन्दित तुल्याउँछ ।
साथसाथै यस क्षणमा कसरी शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्न आवश्यक छ। गर्भावस्थामा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न वा गर्भको बच्चाको स्वस्थ्य सही राख्नका लागि पनि गर्भवतीले आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीमा जोड दिनुपर्छ। अतः गर्भावस्थामा कसरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने त ?
कतिपयलाई बिहान उठ्न अल्छी लाग्छ । यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि बिहान चाँडै उठ्नु जरुरी छ । अझ सूर्योदयअघि । बिहान ४ बजेदेखि सूर्योदयअघिको समयलाई ब्रह्ममुहूर्त भनिन्छ । यसबेला वायुमण्डलमा शुद्ध वायु चलिरहेको हुन्छ, जसलाई प्राणवायु भनिन्छ। बिहान ४ बजेको आसपासमा उठ्ने र खुला हावामा हिँडडुल गर्ने अभ्यास एकदमै उचित हुन्छ ।
यस क्षणमा गहिरो सास लिने, छाड्ने अभ्यास गर्नु उचित हुन्छ । यसले शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन प्रवाह हुन पाउँछ । यो आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि समयमा गहिरो सास लिने र छाड्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । सकेसम्म शान्त र हरियाली वातावरणमा बसेर यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ । त्यसो त घरमै काम गरिरहेको बखत, विश्राम गरिरहेको बखत पनि यो अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
प्राणायामकै एक सरल र उत्कृष्ट विधि हो यो पनि । एउटा नाक बन्द गर्ने, अर्को नाकले गहिरो सास लिने । उक्त नाक बन्द गरेर अर्को नाकले सास छाड्ने । पुनः सास छाडेको नाकले सास लिने । यही क्रिया निरन्तर गर्ने । अनुलोम बिलोम कुनै पनि क्षणमा गर्न सकिन्छ । यस क्रियाले हाम्रो फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउँछ ।
मनतातो पानीले नुहाउने
गर्मी मौसम छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म दिनदिनै नुहाउनु उचित हुन्छ । मनतातो पानीमा नुन मिसाएर नुहाउनु उत्तम हो । यसबेला शारीरिक सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नियमित नुहाउनु राम्रो हो ।
यतिबेला बिहानको घाममा शरीरलाई न्यानो बनाउनु उचित हुन्छ । कम्तीमा १० मिनेट भए पनि घामको तापमा बस्नुपर्छ । यसले शरीरमा भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । गर्भावस्थामा भिटामिन डी एकदमै आवश्यक हुन्छ ।
मौसमी सागपात र फलफूल
मौसमी खानपानमा जोड दिनुपर्छ । सलाद, सागपात, फलफूल, झोलिलो पदार्थ खानेकुरामा सामेल गर्नुपर्छ । खरबुजाजस्ता फलफूलको सेवनले निकै फाइदा गर्छ । नियमित एक गिलास शुद्ध दूध पिउनु उचित हुन्छ ।
भोक लागेकोभन्दा केही कम खाने
जब भोक लाग्छ पेटभर खानु ठिक हुन्न । समयसमयमा खाइरहनुपर्छ, जसले गर्दा सहजै पच्न सकोस् । जति भोक लागेको छ, त्योभन्दा केही कम खानेकुरा खानुपर्छ । खाना सुपाच्य र पोषिलो हुन जरुरी छ ।
हल्का काम गरेर भए पनि शरीरलाई सक्रिय राख्ने । भारी काम गर्न उचित हुँदैन । यद्यपि सामान्य कामहरू गरेर शरीरलाई फूर्तिलो राख्न सकिन्छ।
ध्यानले मनलाई शान्ति दिन्छ । बेचैनी, तनाव, डर हटाउँछ । ध्यान मुद्रामा बसेर आफ्नो श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित गर्ने । दैनिक १०–१५ मिनेट भए पनि ध्यानको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
संगीत सुन्ने, मनोरञ्जन गर्ने
सकेसम्म आफूलाई रमाइलो माहोलमा राख्ने प्रयास गरौं । रोमान्टिक गीतहरू सुन्ने, फिल्महरू हेर्ने, पुस्तक पढ्ने गरौं । यसले मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ । नकारात्मक भाव आउन दिँदैन । दुःख र भय हटाउँछ।
पेस्तोल सहित १७ वर्षीय एक युबक पक्राउ
भारतीय नागरिकले झूठो विवरण पेश गरी दाङ जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएको खुलासा
क्वारेन्टिनमा बसेका एक ब्यक्ति को मृत्यु
नेपाल सरकार द्वारा चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण
संयुक्त अबर इमिरेट्सले पाकिस्तानबाट आउने सबै उडान रद्द गर्ने घोषणा
श्रेष्ठको घरबाट १८ तोला सुन र चाँदी चोरीको आरोपमा तीन जना पक्राउ
मदन पुरस्कार ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह’ पुस्तकका लागि भगिराज इङ्नामलाई दिने निर्णय
२०२५ सम्ममा ताइवानमाथि आक्रमण गर्न चीन पूर्ण रुपमा सक्षम हुने
कुमार पौडेलको हत्या अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहितलाई जोडेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता
पहिलो पटक अन्तरिक्षमा चलचित्र छायांकन गर्न रुसी कलाकार टोली अन्तराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रतर्फ
विश्वप्रसिद्ध प्रगतिवादी साहित्यकार लुसुन भन्थे, ‘‘मरेकाहरूबाट बाँचेकाहरूले नसिके बाँचेकाहरू पनि मरेसरह हुन्छन्।’’
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज छ अङ्क बढीले ओरालो
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ मा रहेको दाजुङखोला लघुजलविद्युत् परियोजना बन्द
नेपाली कांग्रेसले अहिले हिमाली जिल्लाहरुमा अधिवेशन गरिरहेको छ। सोमबारसम्म १० हिमाली जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक
दक्षिण कोरियाली सिरिज ‘स्क्विड गेम’ विश्वभर अत्यन्त लोकप्रिय
माल्दिभ्समा जारी १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा उपाधि दाबेदार भारतले बंगलादेशसँग बराबरी
गुल्मीमा पहिरोमा परि २ बालबालिकाको मृत्यु
को बन्ला एमालेको शक्तिशाली महासचिव?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने आव्हान
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १०३० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण
सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ